တစ်ဦးကိုအသုံးပြုမော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့စိတ်ညစ်စရာအလုပ်တခုကိုရှိနိုင်ပါသည်. There areafew things that you can check yourself to ensure that you are gettingagood vehicle and good quality. One of the most important things you need to check when buyingaused vehicle is the engine crank case oil. ဒီ post မှာတော့ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုစစျဆေးဖို့ဘယ်လောက်ကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကြည့်ရှုပါရန်.
ကျွန်တော်တစ်ဦးအသုံးအများဆုံးကားတစ်စီးကိုကျော်ရှာဖွေနေသည့်အခါစစျဆေးဖို့ကြိုက်နှစ်သက်အလွန်ပထမဦးဆုံးအရာအင်ဂျင်ကိုဆီ. လုပ်ဖို့အကြှနျုပျ၏အကွိုကျဆုံးမှုအရာတစ်ခုမှာရှေ့ဆက်သွားနှင့်ကားတစ်စီးအတွင်းမှထိုင်နှင့်နေတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ရေနံပြောင်းလဲမှုကုမ္ပဏီရဲ့တစ်ဦးထံမှပြီးခဲ့သည့်ပြောင်းလဲမှုရေနံစတစ်ကာအဘို့ကိုကြည့်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့်ပြောင်းလဲခဲ့သောနေ့စွဲနှင့်မိုင်အကွာအဝေးမှာကြည့်ပါနှင့်လည်း odometer လောလောဆယ်တွင် reading သောမိုင်အကွာအဝေးမှာကြည့်ရှု. ထိုသို့မိုင်အကွာအဝေးနဲ့ရက်စွဲတစ်ခုခုပေါ်မှုကြောင့်အတိတ်မဟုတ်ကြောင်းသေချာပါစေ. ဒါ့အပြင်စတစ်ကာအပေါ်စာရင်းသွင်းသောရေနံထုတ်လုပ်သူများကအကြံပြုသည်ဆီ၏တူညီသောအလေးချိန်ကိုက်ညီမှုသေချာစေရန်စစ်ဆေး. အများစုဟာကြိမ်ဆီ၏မှန်ကန်သောအလေးခြိနျရုံပျဉ်းအောက်မှကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အဘယ်သို့ဆုံးဖြတ်ရန်လွယ်ကူသည်. အများစုဟာထုတ်လုပ်သူ crank ကိစ္စတွင်ရေနံဝထုပ်ကိုအပေါ်အဲဒီမှာစာရင်းပြုစုဒါမှမဟုတ်သူတို့အချို့သောသတင်းအချက်အလက်များပေးတော်မူသောပါးပျဉ်းအောက်မှအဘယ်မှာရှိနေတဲ့စတစ်ကာများ.
သူတို့ဒြပ်ရေနံကို အသုံးပြု. သို့မဟုတ်သမားရိုးကျခံရလျှင်သင်တို့ကိုလည်းပိုင်ရှင်မေးရန်လိုအပ်ပါတယ်. အကြောင်းရင်းကားတစ်ချိန်က crank ကိစ္စတွင်အတွက်အသုံးပြုဒြပ်ရေနံရှိခဲ့ပါတယ်ကြောင်းသင်ချောဆီအရည်ကြည်ပြဿနာများကိုရှောင်ရှားရန်ဒြပ်သုံးပြီးဆက်ပြီးမှဆိုပါစို့ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်. တချို့ကအသစ်များကိုယာဉ်များကိုယခုစက်ရုံအနေဖြင့် crank အမှု၌ဒြပ်ရေနံနှင့်အတူလာ, နှင့်ပါးပျဉ်းအောက်မှသို့မဟုတ်ယာဉ်သာဒြပ်ဆီများတွင်အသုံးပြုရှိသည်နိုင်ကြောင်းသင်ပြောနေ core ကိုထောက်ခံမှုအပေါ်တစ်ဦးစတစ်ကာရှိလိမ့်မည်. ဒြပ်တွေအကြောင်းမှတ်မိဖို့ရာတစ်ခုမှာရေနံပြောင်းလဲမှုရှိခြင်းသောအခါသင်တို့ကိုသိသိသာသာပိုပြီးကုန်ကျမည်ဖြစ်ပါသည်. ပုံမှန်အစည်းအဝေးဆီနှင့်ရေနံပြောင်းလဲမှုကုန်ကျမည် $20 ရန် $25, ဒြပ်နှင့်အတူရေနံပြောင်းလဲမှုကုန်ကျမည်နေစဉ် $50 ရန် $80 ထို crank ကိစ္စတွင်ရရှိထားသူဘယ်လောက်ရေနံအပေါ် မူတည်..
နောက်တစ်ခု, သင်ရှေ့ဆက်သွားနှင့်ပါးပျဉ်းဖွင့်လှစ်ချင်. အင်ဂျင် crank ကိစ္စတွင်ကျဆင်းလာချောင်းကို Locate. များသောအားဖြင့်ကဤသို့ကျဆင်းလာတုတ်အဝါရောင်လက်ကိုင်သို့မဟုတ်အဖုများ. သင်တို့နှင့်အတူအဝတ်အစားခပ်နွမ်းနွမ်း Have. ရှေ့ဆက်သွားနှင့်ကျဆင်းလာချောင်းကိုဆွဲယူနှင့်ချွတ် wipe. Then reinstall the dip stick and pull it out again and check to see that the oil is in the recommended range. အဆိုပါ dipsticks crank ကိစ္စတွင်ရေနံများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့ operating အကွာအဝေးညွှန်ပြသူတို့အပျေါမှာအမှတ်အသားများ၏အချို့သောမျိုးများ. သင့်ရဲ့လက်ချောင်းပေါ်တွင်ဆီအချို့ထည့်သွင်း, သို့မဟုတ်သင်ရှိသည်အဝတ်အစားခပ်နွမ်းနွမ်းအဖြူပါလျှင်, တစ်ဦးမှာအကောင်းတစ်ဦးကြည့်ရှုယူရှေ့ဆက်သွား. ဒါကြောင့်အဘယျသို့အရောင်ဖြစ်ပါတယ်? တစ်ခုစီရှိပါတယ်အင်ဂျင်စက်တွင် 150 တထောင်မိုင်အကွာသို့မဟုတ်လျော့နည်း, ကအနည်းဆုံးအတန်ငယ်ကြောင့်ရွှေရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်၏ရှိထားသင့်. ဒါကြောင့်အနည်းငယ်ညစ်ပတ်ပါကအဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်, နောက်တဖန်ရေနံကိုပြောင်းလဲဖို့အချိန်နီးစပ်သူဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လျှင်.
နောက်တစ်ခု, ရေနံအနံ့ ( ငါကရယ်စရာအသံကိုသိရ, ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုယုံကြည်). ဒါဟာအားမီးရှို့ရာအနံ့ရှိမနေသင့်. ဒါဟာတစ်ခုခုကြောင့်ဓာတ်ငွေ့အနံ့ရှိမနေသင့်. ဒါကြောင့်ကုန်ကြမ်းသဘာဝဓာတ်ငွေ့များကဲ့သို့အနံ့လိုလျှင်, ထို့နောက်ထိုအရပ်၌လောင်စာစနစ်ဖြင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကြောင့် crankcase သို့ကုန်ကြမ်းလောင်စာစွန့်ပစ်နိုင်. ဤကဲ့သို့အများစုဟာကြိမ်စစ်ဆေးမှုများ engine ကိုလငျးကိုချွတ်သတ်မှတ်မယ်လို့.
အင်ဂျင်ကရေနံကိုစစ်ဆေးခြင်းသင်အရည်အသွေးကောင်းတစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်ကိုဝယ်ယူရန်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံနိုင်ရန်အတွက် check လုပ်ထားရမည်ဖြစ်သည်ကြောင်းအရာများစွာကိုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. စစျဆေးဖို့အမှုအရာနှင့်သူတို့စစျဆေးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူဖို့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုကြည့်ရှု @ KNWAutobody.com